1 Aug 2019 . 10:07 AM
ချစ်ခြင်းတွေကို ပုံဖော်တဲ့အခါ ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးတွေ လုပ်ပြနေတာထက် Relationship ကြားမှာ တကယ်ကိုအသုံးဝင်မယ့် နည်းလမ်းတွေနဲ့ ချဉ်းကပ်ဖို့ကို မမေ့စေချင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီအရာတွေ မရှိတော့ရင် ခရီးဆုံးထိဆက်ဖို့အတွက် အတားအဆီးအပိတ်အပင်တွေ ရှိလာဖို့ များလို့ပါပဲ။ ဘယ်လိုအချက်တွေက ခရီးဆုံးထိဆက်ဖို့အတွက် အဓိကကျမလဲ….
သူအဆင်မပြေရင် သင်က ကူညီမယ်။ သင့်အလှည့်ဆို သူကတစ်လှည့်ပြန်ကူညီ။ အခက်အခဲဆိုတာ ကြုံလာမှာမို့ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် အပြစ်တင်နေမယ့်အစား အဖြေအတူရှာတွေ့တဲ့အထိ ဖေးမပေးလှည့်ပါ။
ဥပမာ – ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို နှစ်ယောက်အတူ ဝင်ပြိုင်ရာက နိုင်သွားတယ်ဆိုပါစို့။ ပြန်တွေးကြည့်တိုင်း တစိမ့်စိမ့်နဲ့ ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရှိတာ ဘယ်လောက်တောင် ကြည်နူးဖို့ကောင်းလိုက်မလဲ။ ဒီလိုပါပဲ နှစ်ယောက်အတူ ရည်မှန်းထားတဲ့အရာတွေကို အတူတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီး ရလဒ်တစ်ခုခုရှိအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါမှ တကယ့် Couple Goal အစစ်ပါ။
နေရာတိုင်းမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေ မရှိတာ
“ဟိုနေရာ မသွားနဲ့။ ဒီလူနဲ့ မတွေ့နဲ့။ တစ်ခုခုဆို ငါ့အသိပေး။” ဒီလိုပြောနေတာက လူကိုချောင်ပိတ်ထားလိုက်သလိုဖြစ်စေပါတယ်။ လှောင်အိမ်ထဲမှာနေရလို့ဆိုပြီး ပျော်တဲ့ တိရစ္ဆာန်ကို သင်တွေ့ဖူးပါသလား။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်သွားသွား၊ ဘယ်လာလာ၊ ဘာတွေပဲ လုပ်လုပ် လွတ်လပ်မှုရှိစေပါ။ နောက်တစ်ခု မဖြစ်မနေရှိရမှာက
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကအရေးကြီးပါတယ်။ ချစ်သူတွေကြားမှာ စကားများများပြောပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာ ဒီအချက်ကြောင့်ပါ။ မကြိုက်တဲ့အချက်တွေ၊ သက်သောင့်သက်သာ မဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားမှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဆိုးတဲ့အခါလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ဘာကြောင့်စိတ်ဆိုးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကို မပြောဘဲ တစ်ယောက်ထဲကောက်နေလို့ကတော့ တစ်ဖက်လူလည်း အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ကြပုံတွေ မတူညီကြပါဘူး။ တချို့က သဝန်တိုမှုတွေ အပြည့်နဲ့ ချစ်ကြတယ်။ တချို့က ဒေါနဲ့မာန်နဲ့ တချို့ကျတော့လည်း အေးတိအေးစက်။ ဘာပဲပြောပြော သူ့အခြေအနေ၊ ကိုယ့်အခြေအနေအပေါ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာတွေရှိပြီဖို့ဆိုတာ အပေါ်က အချက်တွေကမှ တစ်ဆင့် ဖြစ်လာတာပါ။ ဒီတော့ အပေါ်ကအချက်တွေရှိမယ်ဆိုရင် နားလည်မှုရှိတဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်လာဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။